कलिलै उमेरमा बसेको मायाप्रेमले लियो १८ वर्षे किशोरीको ज्या*न - News 88 Post
कलिलै उमेरमा बसेको मायाप्रेमले लियो १८ वर्षे किशोरीको ज्या*न
September 27, 2021 N88LeaveaComment on कलिलै उमेरमा बसेको मायाप्रेमले लियो १८ वर्षे किशोरीको ज्या*न
काठमाडौं । एक किशोरीको माया प्रेमका कारणले ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । शव फेला परेको तीन दिनपछि ती किशोरीको हत्या गरेको आरोपमा फुङ्लिङ नगरपालिका- १० फुरुम्बुका २४ वर्षीय रामकुमार कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
तीन दिनअघि अर्थात् गएको शुक्रबार बिहान फुङ्लिङ नगरपालिका- ७ दोखुको सेती चौतारा नजिक निगाले भीरमा १८ वर्षीया पुष्पा तबेबुङ लिम्बूको शव फेला परेको थियो । जिल्लाको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका- ३ लिङ्खिम घर भई
हाल सदरमुकाम फुङ्लिङको बिहीबारे टोलमा डेरा गरी बस्दै भएकी पुष्पाको शव शंकास्पद अवस्थामा फेला परेपछि सोहीअनुसार प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार हत्या आरोपी कार्की र किशोरीबीच आठ-नौ महिनादेखि प्रेम सम्बन्धसँगै शारीरिक सम्बन्धसमेत भएको थियो । विवाहको प्रसंग उठाउँदा अस्वीकार गरेपछि विवाद हुँदा किशोरीको हत्या गरेको कार्कीले प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् ।
लामो समयदेखि नै आफूलाई गाली गलोज गर्ने तथा अनावश्यक तनाव दिने गरेका कारण योजनामै हत्या गरेको कार्कीको बयान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यता, घटना भएको सुरुकै दिनदेखि आफन्तले भने पुष्पाको हत्या भएको र हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म शव जिम्मा नबुझ्ने बताउँदै आएका थिए । आइतबार बिहान मात्र पीडित परिवारले सदरमुकाम फुङ्लिङमा
पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनमा प्रहरी प्रशासन उदासीन भएको आरोप लगाएका थिए । आफूहरूले आशंका गरेका व्यक्तिविरुद्ध सुरुमै किटानी जाहेरी दिँदासमेत प्रहरीले बेवास्ता गरेको पनि उनीहरूको गुनासो थियो ।
ह’त्या ग’रिएकी पुष्पाका बुबा वीरबहादुर लिम्बूले छोरीको हत्या नै भएको आशंकामा किटानी जाहेरी दिएको र घटनामा संलग्नलाई पक्राउ नगरेसम्म न्यायका लागि आन्दोलित हुने साथै महिनौँ दिनसम्म पनि शव नबुझ्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।
प्रहरीको उदासीनता वा बेवास्ताले पीडित परिवारलाई थप पीडा र उत्तेजनामा पुर्‍याएकाले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन अधिकारकर्मी, संचारकर्मीसमेतलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।
हत्या आरोपी सार्वजनिक गरेपछि आफन्तले शव बुझेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा शव पोस्टमार्टम गरी परिवारलाई बुझाएको प्रहरी नायव उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले जानकारी दिए ।
प्रनाउ राणाका अनुसार जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर आरोपी उपर थप अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको छ । किशोरी डेरा बसेर सदरमुकाम फुङ्लिङकै भानुजन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा पढ्दै थिइन् ।
विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको जहाज २ घण्टा फन्को मारेर त्रिभुवन विमानस्थलमै अवतरण, यस्ताे छ कारण
सुध्रिएनन् पूर्व युवराज पारस : फेरि अर्की युवती च्यापेर घुम्दै !
माधव नेपालले ओलीलाई घोक्र्याएर निकाली छोडे !
July 9, 2021 N88
माधव नेपालकाे गुटले खोज्यो १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी, होला त सहमति ?